antarvasna xxx story: Nepali sex story
Showing posts with label Nepali sex story. Show all posts
Lockdown m chudai ki Nepali sex story
October 06, 2020 chikeko katha, daver bhabhi ki chudai, nepali chudai story, Nepali sex story, xxx nepali No comments
Daver bhabhi sex stories, पढ्नुहोस् कि म र मेरी बुहारी कोलोना लकडाउनमा एक्लै थिए। एक दिन जब मैले उनको बहिनीको आधा खुट्टाको बिल्ली देखेँ, म आफूलाई प्रतिरोध गर्न सक्दिन।
नयाँ पाठकहरूको लागि, म छोटो परिचय दिन्छु। म हापुरा (यू.पी.) का निवासी हुँ र विवाहित हुँ, तर यदि मैले कुनै प्रकारको बिरालो भेट्टाए भने म चुदाईबाट टाढा रहने छैन। म 37 37 बर्षको भएँ र मेरो उचाई 7.7 फिट छ।
अब म आज मेरो कथा सुरू गर्छु, जुन मेरो भाउज्यूको कथा हो। मेरो भाई मभन्दा दुई वर्ष जेठो छ, जसको नाम सलमान हो। उनको बेगमको नाम समीना हो, जो म भन्दा दुई वर्ष कान्छी छ।
भाउज्यूको घटना बताउनु अघि म तिमीलाई उनीसँग परिचय गराउँछु। उनी निष्पक्ष रूप र हेर्नमा अति सुन्दर छिन्। हाम्रो महिलाहरू कत्ति सुन्दर छन् तपाईंलाई थाहा छ। उसको उचाई .6..6 फिट छ।
उसको शरीरमा सब भन्दा आकर्षक अंश उसका हातहरु हुन्। तिनीहरूको बाक्लो बोसो तानाहरू यति सुन्दर छन् कि सबैको आँखा पहिले तिनीहरूलाई जान्छ। तपाई यसबाट साइजको बारेमा अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि बुर्का भित्र पनि, यो छुट्टिन्छ।
साथीहरु, म कृषि विभागमा काम गर्छु र मेरो भाई मुम्बई मा व्यापार गर्दछ। मेरा अघिल्ला कथाहरूमा मैले भन्यो कि भैयाको ब्यापारको कारण, म उही हुँ जसले आफ्नी छोरी, अर्थात् मेरो भान्जीलाई कलेजमा प्रवेश दिए र उनको कोठामा उनलाई चुदाए।
Nepali sex story : - bhabhi ko apni biwi bnaker chudai ki / bhabhi devar ki chudai
कोरोना भाइरसको प्रकोपको कारण, मलाई मेरो जागिरबाट छुट्टी दिइयो र मेरो भाई मुम्बईमा अड्किनुभयो। मेरी श्रीमती उनको मातृ घरमा फसेकी थिइन। अब म घरमा बसिरहेको थिएँ। हाम्रो घरमा rooms कोठा, एउटा भान्छा र एउटा बाथरूम छ। दाजु एउटा कोठामा बस्नुहुन्छ, म अर्को कोठामा बस्छु र अम्मी एउटा कोठामा बस्छिन्।
मेरो बुहारीले घरमा मक्सी लगाएको छ। एक दिन म मेरो कोठामा सुतिरहेकी थिएँ र भाभी मेरो कोठा सफा गर्दै थिए। अचानक टेबलबाट गिलास खस्यो, जसको सुन्दा मेरो निद्रा खोलियो।
आँखा रबिंग गर्दै, मैले उसकी दिदीलाई हेरी, उनी सफा गरिरहेकी थिइन र उसका बुबिज आधा देखिन्थे। बहिनीको बिल्ली देखेर, मेरो दिमाग व्याकुल भयो र म अभिलाषाको आगोमा जल्न थालें।
बहिनीले कोठा छोड्दा सम्म मैले आफूलाई नियन्त्रणमा राखें। ऊ हिडेको लगत्तै, मैले लंड निकाले र हल्लाउन थाले। मैले छिटो फिस्टि started गर्न थालें र त्यसपछि मेरो अण्डवियरमा सामान हटाएँ।
त्यसोभए बिहानको १०:०० भयो। अम्मी औषधी लिन नजिकैको अस्पताल गइन्। म नुहाउन बाथरूम जान थालें। बाथरूमको ढोकामा पुग्ने बित्तिकै मैले सिसकारिस जस्तो आवाजहरू सुनें। त्यहाँ एउटा कानून हुन सक्थ्यो किनकि घरमा कोही थिएन।
उनकी दिदीको बुहारी सुनेर, मेरो लंड ठाडो हुन थाले। फेरि त्यो क्षणको आनन्द लिन, म ढोका बाहिर उभिए र मेरो मुख पिट्न थाले। दुई मिनेट पछि अचानक भाभीले ढोका खोल्यो र म बाहिर हातमा हात राखेर लंड चट्दै थिएँ।
उसको टकटकी मेरो लंडमा सिधै खस्यो। लंड देखेपछि उनको अनुहार पूरै रातो भयो र उनी शर्माको नजिक आईन् र आफ्नो कोठामा दगुरे। अब म नुहाउन बाथरूममा गएँ र नुहाएँ र आफ्नो कोठामा पुगें। त्यहाँबाट मैले बनियान र आधा तल्लो लुगा लगाएँ।
र जब म भान्साकोठामा जान लागें, मैले देखें कि भाभी कालो मैक्सीमा उभिएर रोटी बनाउँदै थिए। म तिनीहरूको पछाडि उभिएँ। उसको गधाको नजिक पुगेपछि, मेरो लंड निक्करमा नै निर्माण भयो।
Nepali sex story : - Bhabhi Maa Ke sath chudai / Daver bhabhi ki chudai
केहि क्षणहरुमा मेरो अल्डाडा टेन्न हुन थाल्यो र भाभीको गधामा राख्यो। अब मलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो भइरहेको थियो। हामी दुबै घरमा एक्लै थियौं र मलाई मेरो बिरालालाई मार्ने जस्तै लाग्यो।
त्यसपछि अन्ततः मैले एक हातले भाउज्यूको गधा समातेर अर्को हातले उनको निप्पल निचोरे।
उनी तुरुन्तै उफ्रिए र चारैतिर घुमाइन्। उनले भनिन् - तपाई इमरानलाई के गर्दै हुनुहुन्छ?
मैले भनें- भाभी, आज मलाई दिनुहोस् कि दिनुहुन्छ? कृपया!
उनीहरूले भने - तपाईं बौलाहा हुनुहुन्छ, परमेश्वरसँग डराउनुहोस्, यदि तपाईंको भाईले भेटेमा के लगाउँला होला?
मैले भनें - कसले उनीहरूलाई भन्दै छ। कुरा तपाई र म बीच रहनेछ।
यसो भनिसकेपछि मैले मेरो हात मैक्सीको भाउजीको घाँटीमा हालेँ र उनको अचिचियान समातें।
उनले भनिन्- ठीक छ ... ठिक छ ... यहाँ भान्छामा केही पनि नगर्नुहोस्। म केहि बेरमा तपाईंको कोठामा आउँछु। मेरो लागि प्रतीक्षा गर्नुहोस्
मैले भनें - म पक्का छु कि तपाईं आउँनु हुन्न?
उनले भनिन्- हो, म निश्चित छु।
Nepali sex story :- Neha bhabhi ki chudai ki sex story
म खुशीले मेरो कोठामा गयो। एक घण्टा पछि, बुहारी खाना लिएर मेरो कोठामा आई। हामी दुबै खाना खायौं र टिभी हेर्न थाल्यौं।
केही समय पछि भाउज्यूले मलाई सोधिन् - मेरो बहिनी कहिले आउनेछ?
मैले भनें - कानूनलाई थाहा छैन, अब लकडाउन छ।
उनले भनिन् - त्यसोभए तपाईं लामो समयसम्म तिर्खाउनु पर्नेछ।
मैले भनें - तपाईं मेरो भाइलाई राती सम्झनुहुन्न?
त्यो उद्धरण आउँछ, तर यो मुम्बईमा छ।
उसको बहिनीको हात उसको पिनमा राख्दा मैले भनें - के भयो, म घरमा पनि छैन? तपाईंले मेरो एकाकीपन हटाउनुहुन्छ र म तपाईंलाई खुशी पार्दछु।
यति धेरै कुरा गरिसकेपछि मैले मेरो निक्करको बटन खोले र भाभीको हात मेरो टेन्सनमा राखे। मैले उसको घाँटी तान्यो र ओठमा उसलाई जोरले चुम्बन गरे। उनले सुरुमा थोरै विरोध गरी तर भाभीको हात मेरो लंडमा कडा भयो।
हामी दुवैले अब एक अर्कालाई जोडले जोरले चुम्बन गर्न थाले। म भाभी मा आउनुभयो र मक्सी माथी मा धेरै कडा उनको cunts निचोड़ गर्न शुरू।
काकडी उनको दिदीको मुखबाट जोर जोरले शुरू भयो - अह्ह… इमरान… आरामसँग प्रेस गर्नुहोस्… तपाईको भाइले यति जोरको साथ कहिले दबाएन।
मैले भनें - आह ... रोक्नुस् नजुर, बुहारी ... तपाईका छालाहरू यति राम्रा छन कि म उनीहरुलाई तल झार्नेछु। जब देखि मैले बिहान तिनीहरूलाई तपाईको माक्सीमा झुण्डिएको देखेको थिएँ, मेरो लंडले मलाई सताएको छ। अब म अब अरु सासूको पर्खाइमा बस्न सक्दिन ... अह्ह्ह्ह… चोद तपाईंलाई आज दिनेछ।
धेरै बोल्दै, मैले कानूनको अधिकतम उठाएँ र यसलाई उनको काँधबाट हटाएँ र उनको शरीरबाट अलग गरें। बहिनी सासूले तलबाट कुनै कुरा लगाएको थिएन। उनी पूर्ण रूपमा ना naked्गो थिए र म उनको बिल्ली माथि टुक्रियो।
पहिले मैले उनको बाक्लो स्तनहरु थिचे र त्यसपछि बदली मा उनको मुख मा लिन शुरू गरें। बहिनी-बुहारीले मेरो पछाडि र टाउकोको कपाललाई स्याहार गर्न थाल्नुभयो।
मैले भाउज्यू ofbs इन्चको बूब्सहरू चुस्न थाले। उनी ठूलो स्वरले जिस्गल गर्न थालिन् - अह्ह… इमरान… ओउइ… अह्ह… उफ…
कारणले गर्दा मैले फेरि भाउको अनुहारमा ताला लगायो र ठूलो स्वरले पिउन थालें।
Nepali sex story : - Meri pyari bhabhi ke sath chudai ki Hindi sex story
अब मैले उसको खुट्टा, पेट र नाभीमा चुम्बन गरे उनको बिल्लीमा। मैले उनको फुलेको बिल्लीमा चुम्बन गरें। बहिनी सासूले लामो कामुक सास भर्यो ... र त्यसपछि उनको हातले उनको बिल्ली थिचिन शुरू गर्नुभयो।
मैले बुझे कि भाभी अब पूर्ण मुडमा छन्। मैले भाउज्यूलाई चुस्न थालें र भाभी फेरि रुन थालिन्।
केहि बेरमै, सासुले बिन्ती गर्न थालिन् - बस… अब चोद डो देवरजी… मैले लामो समयदेखि लंड लिइन। यो मेरो बिल्ली मा मेरो लंड संग चोद र मजा दिनुहोस्।
मुखलाई बिरालोबाट अलग गर्दै मैले भनें - मेरो हतियार पनि एकपटक कानून जाँच गर्नुहोस्।
त्यो बोली- ल्याउनुहोस्, यसमा ठूलो कुरा के हो, तपाईंको दाज्यूहरू धेरै खुसी छन्।
बहिनी-बुहारी उठे र उनको मुखबाट मेरो लंड चुस्न थाले। म पनि जन्नतको यात्रामा गएँ। वास्तवमा, भाउज्यू एकदम चिसो अल्डोडा चूसिरहेकी थिई। म भर्खरै आउँदै थिएँ कि मैले मेरी सासुलाई रोकें।
त्यसपछि मैले उनको बहिनीको कम्मरमुनि तकिया राखें। यो संग, उनको बहिनी को बिल्ली उठे। मैले मेरो लंडको मासु भाउज्यूको चियामा राखें र एउटा जोरदार प्रहार गरे।
यो झटका साथ मेरो लंड उनको बिल्ली मा inches इन्च प्रवेश गरे।
भाभी ज्वाला चिच्यायो- UUUI… UUUI… AMMI… मरे।
मैले भनेँ- भाभी के भयो? भाइसँग पनि चुदवाती!
उनले भनिन - तिनीहरू लामो र बोसोको छैनन्, तिनीहरूले यसलाई आराम दिए, तपाईंले मलाई मार्नु भयो।
मैले केही भनेँ नानी, जेठो, दुई मिनेट भित्रमा तपाईले यति रमाइलो गर्न थाल्नुहुनेछ कि तपाईले आफूलाई यो आवाजमा चुस्त गर्न भन्नुहुनेछ।
यति धेरै बोलेपछि, म कानूनको बिल्ली मा लंड चाटना शुरू गर्नुभयो।
दुई मिनेटमा नै, उनकी बहिनीको पीडा हरायो र उनीले आफ्नो गधालाई तलबाट उठाउन शुरू गरे। मैले पनि स speed्केत पाउँदै आफ्नो गतिलाई गति दियो र बिस्तारै सम्पूर्ण आठ इन्चको मुर्ति उनको अनुहारमा पुरा हुन थाल्यो। अब म गति संग बहिनीको बिल्ली चुदाई गर्न थाले।
केहि बेरमै भाभीले कामुद आवाजहरू निकाल्न चुदाउन शुरू गर्यो - अह्ह्ह… इमरान… र मलाई जोर जोरले चुदाई गर… मेरो पुतली चौडा बनाऊ। ओह ... र चर्को… र छिटो इमरान… अह्ह्ह… यसको मजा लिदै।
यस तरिकाले, भाभी कामुद chudwa कामुक आवाज गर्दै थियो र मेरो जोश पनि बढ्दै थियो। लगातार १ minutes मिनेट को लागी, मैले मेरो सासुलाई त्यही गतिमा खाना खुवाएँ। उसको बहिनीको बिल्लीबाट एउटा टाँसिएको पदार्थ आउँदैछ, जसको कारण पूरै कोठा प्रतिध्वनी हुँदै थियो।
अब मैले बढि चाँडो र मेरी दिदी पीडाले चिच्याउन थालिन्। मेरो कुखुरा यति जोरको साथ कानुन भित्र धकेलीरहेको थियो कि यो उनको पेट मा प्रवेश गरे जस्तै थियो। २० मिनेट चुदाई पछि उनको पानी बाहिर आयो। उनी थकित र थकित भइन्।
त्यसो भए पछि म पनि पानी लिन गइरहेको थिएँ।
मैले सोधे- मैले मेरा सामानहरू कहाँ निकाल्नु पर्छ?
उनले भनिन् - यसलाई मेरो बिल्लीमा राख्नुहोला, तपाईंको भाई inches इन्च छ ताकि मेरो बिल्लीमा कोरिन नपरोस्। तपाईंले मेरो बिरालोलाई च्यात्नु भयो। म मेरो बिल्ली मा यस Alore को रस प्राप्त गर्न चाहन्छु।
मैले यसलाई -5-। वारमा हिर्काए र त्यस पछि मेरो पानी उनको बिल्लीमा बाहिर आयो। म उनको बिरालामा लंड राखेर उनीमाथि ओछ्यानमा परें।
आधा घण्टा पछि मेरो मुर्ख फेरि खडा भयो।
मैले भाबीको चिया र गधा फेरि दबाउन थालें। उसले फेरि चियाचम्मै मुखमा पिउन थाल्यो। १० मिनेट को लागि चुसाई सकेपछि, मैले उसलाई घोडी बनाएँ र उसको गधाको टाउको उसको गधामा राख्यो। मैले मेरो भाँडामा धेरै पटक थुक्छु र उसको गधामा दगुर्यो।
तब मैले हत्केलामा अलि थोपें र उनको गधा भित्र औंला बनाउन थाले। उसको गधालाई मीठो पारिसकेपछि, मैले लंडको टाउको प्वालमा राखें र यसलाई एउटा धक्काले हिर्काएँ। पहिलो हडतालमा, माथिल्लो टोपी भाभीज्यूको गधामा प्रवेश गर्यो।
उनी ठूलो स्वरले चिच्याइन र छोड्ने प्रयास गर्न थालिन्। तर मैले उसलाई समातें र उसको कन्ट्स पनि कडा निचोर्न थालें किनकि लंडको माथिल्लो टोपी अडिएको थियो। उसको कानमा चुम्बन गरे। एक समय पछि ऊ सामान्य भयो र मैले बिस्तारै उसको गधा चुन्न थालें।
मैले बुहारीको गधा भाडामा गर्दै गरेको रमाइलो उसको भाउज्यूलाई चुदाई गर्दा पनि फेला पारेन। त्यसपछि मैले एउटा जोर जोड्ने हिर्काएँ, त्यसपछि मेरो inch इन्चको भाँडो भित्र घुस्दै उसको गधामा घुसे। म केहि बेर रोकेँ र तेस्रो पुशमा हिर्काएँ।
अब मेरो पूरा लंड भाउज्यूको गधामा थियो। त्यसपछि एक छोटो विराम संग, म जोर जोरले उनको भाभी चुदाई गर्न शुरू। उनी पनि एक समय मा गधा कमबख्त आनन्द लिन थाले।
उनी पनि आफ्नो गधालाई लंड तिर धकेल्न थालिन्। २० मिनेट चुदाई पछि, मेरो पानी बाहिर आउन थाले र म उनको गधा मा मेरो लंड का सबै सामग्री भरियो।
यति लामो निरन्तर चुदाई पछि हामी दुबै थकित थियौं। हामी ओछ्यानमा पल्ट्यौं र निदायौं। त्यसो भए आधा घण्टा पछि अचानक मेरो आँखा खोलियो। मैले यो देखेर भाभी गएकी थिइन। चाँडै उठेपछि, मैले पनि लुगा लगाई फेरि निदाएँ।
यस तरिकाले, भाइ आए सम्म, मैले मेरो भान्जालाई चुदाई गरें र जब म अवसर पाए पछि मैले मेरो भाँडा माझ्न थालें। मैले उनको भाउज्यूलाई धेरै पैसा दिएँ र अब दाजुभाउको सट्टा, मैले मेरो भाँडा चुदाई गर्न थाले।
Nepali sex story : - Dhogi baba se m or meri bhabhi ki chudai ki hindi sex story
कुनै हालतमा मैले भाउज्यूलाई भने कि यो दाइ जस्तो घरमा बस्दै गर्दा दाजु-बुहारीको लि good्ग राम्रो छैन। हामीले अवसर देखे पछि मात्र सेक्स गर्नु पर्छ। उनले ठूलो कठिनाइको साथ आज्ञापालन गरे र त्यसपछि हामीले होशियारीसाथ चुदाई गर्न थाले